जर्मनी सबैभन्दा शानदार किला | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > जर्मनी सबैभन्दा शानदार किला
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 31/01/2020)
जर्मनी स्वाभाविक एक सुन्दर देश हो. तर तपाईं महल सोचिरहेका सुरु गर्दा, तपाईं यसलाई अझ प्रेम हुनेछ. र सबै किनभने जर्मनी छ, धेरै अनुसार, विश्व को महल राजधानी.
त्यहाँ एक पुरा तपाईं भ्रमण गर्न आवश्यक जर्मनी मा शानदार महल पाहुना छ. यस लेखमा, हामी तिनीहरूलाई बीच मात्र सबैभन्दा सुन्दर व्यक्तिहरूलाई ध्यान छौँ. हामी पनि तपाईं कसरी गर्न सक्छन् जानकारी दिन छौँ रेल तिनीहरूलाई पुग्न, गर्न सबै रेल प्रेमीहरूको को आनन्द!
Schloss Neuschwanstein - जर्मनी मा सबैभन्दा शानदार महल
धेरै यो सारा संसार मा सबै भन्दा सुन्दर महल को रूपमा थाहा, केवल जर्मनी. यदि छैन कि, यो लागि प्रेरणा हुनुको लागि प्रसिद्ध पक्कै हो डिज्नी महल. तपाईं यस मा एक नजर गर्दा परी-कथा महल, तिमी किन महसुस. यो जर्मनी मा सबै भन्दा शानदार महल बीचमा छ किन पक्कै बुझ्न सक्नुहुन्छ!
Schloss Neuschwanstein पक्कै राजसी छ, तर तपाईं कसरी त्यहाँ गर्छन्? जर्मनी बारेमा राम्रो कुरा भनेर भन्दा स्थानहरू छ रेल मार्फत जडान. महल गर्न घनिष्ठ रेल स्टेशन फुसेन छ. तथापि, तपाईं कि स्टेशन पुग्न सक्दैन म्यूनिख वा अन्य कुनै पनि ठूलो जर्मन शहर.
Hohenzollern - जर्मनी मा सबैभन्दा जादुई क्यासल
Hohenzollern महल मात्र जर्मनी मा सबै भन्दा शानदार महल बीच छैन - यो सबैभन्दा छ जादुई एक. तपाईं मा पाउन सक्नुहुन्छ बाडेन-Wurttemberg को प्रान्त, श्टुटगार्ट नजिकै. बाडेन-Wurttemberg प्रान्त सबैभन्दा छ underrated जर्मनी मा एक, तर तपाईं यो महल हेर्न एक पटक, तपाईं आफ्नो राय परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ!
तथापि, महल गर्न प्राप्त समस्याग्रस्त हुन सक्छ, सम्पूर्ण लायक albeit यसलाई. सबै भन्दा राम्रो तरिका Hechingen गर्न श्टुटगार्ट देखि एक रेल लिन छ. त्यसपछि तपाईं एक लिनु आवश्यक लामो पदयात्रा र महल पुग्न ठाडो पहाडी चढ्नु. म ठट्टा छु! महल शहर गर्न एकदम नजिक छ रूपमा एक शटल बस वा Hechingen देखि ट्याक्सी लिन सक्छ.
Hohenzollern Sigmaringen - जर्मनी मा Grandest क्यासल
हाम्रो विनम्र राय मा, जर्मनी मा सबै भन्दा शानदार महल कुनै सूची Hohenzollern Sigmaringen उल्लेख बिना पूर्ण हुन सक्छ. यो तपाईं कहिल्यै आफ्नो आँखा राख्नु छौँ सबैभन्दा व्यापक र grandest महल छ! र यदि त्यो पर्याप्त थिए, यो पनि utterly मनोरम छ.
Hohenzollern-Sigmaringen बाडेन-Wurttemberg मा यसैले छ; मान्छे रूपमा प्रान्त प्रशंसा किन छैन त यो पूर्ण baffling छ जर्मनी सबैभन्दा सुन्दर एक!
तपाईं एक सहरमा महल पाउन सक्नुहुन्छ देखि - यात्रा लागि जाँदा, यसलाई सजिलै रेल पहुँच छ. सबै भन्दा राम्रो तरिका अलम वा श्टुटगार्ट देखि एक रेल लिन र त्यसपछि महल गर्न हिंड्न छ.
अलम गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
श्टुटगार्ट अलम गाडिहरु गर्न
लिपजिग अलम गाडिहरु गर्न
नूर्नबर्ग अलम गाडिहरु गर्न
महल एउटा सानो पहाडी मा एक्लै खडा, र यो साँच्चै देखिन्छ शानदार. तथापि, एक पटक तपाईं यसलाई अझै पनि Inhabited कि खातामा लिन यो त एक्लो छ! हो, को Eltz परिवार लागि महल आयोजित छ 33 पुस्तामा!
जब यो त्यहाँ प्राप्त गर्न आउँछ, तपाईं हिंड्न वा प्राप्त गर्न हुनेछ एक बस Hatzenport देखि वा ट्याक्सी. तथापि, यसलाई देखि रेल द्वारा सानो शहर प्राप्त गर्न सम्पूर्ण सम्भव छ कोबलेन्ज - निकटतम ठूलो शहर.
गाडिहरु Hatzenport गर्न फ्रैंकफर्ट
बन Hatzenport गाडिहरु गर्न
कोलोन Hatzenport गाडिहरु गर्न
डसेलडोर्फ Hatzenport गाडिहरु गर्न
त्यसैले त्यहाँ तपाईँले छ, जर्मनी मा सबै भन्दा शानदार महल पूर्ण सूची. तपाईं आफ्नो अर्को यात्रा मा उनलाई कम्तिमा एक भ्रमण छौँ भन्ने आशा! तपाईंले यी महल रेल द्वारा यात्रा बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, स्वतन्त्र महसुस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस कुनै पनि समयमा.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-spectacular-castles-germany%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, र तपाईं / fr वा / pl र अधिक भाषा गर्न परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / यो.
#deutschland Castles europetravel trainjourney Tranride रेल सुझावहरू यात्रा travelgermany